Izindaba - Fractional Co2 Laser Treatment Vs. I-Fractional Erbium Laser Resurfacing
I-Fractional CO2 Laser Resurfacing
Isebenza kanjani: I-Fractional carbon dioxide (CO2) imishini yokuvuselela i-laser isebenzisa ukukhanya kwe-infrared okulethwa ngebhubhu egcwele i-carbon dioxide ukudala amanxeba e-microthermal ezicutshini ezihlosiwe. Njengoba ukukhanya kumunca isikhumba, izicubu ziyahwamuka, okuholela ekususweni kwamangqamuzana esikhumba asebekhulile futhi onakalisiwe engqimbeni engaphandle yendawo elashwa. Umonakalo oshisayo obangelwa yi-laser uphinde uvumelanise ne-collagen ekhona, eqinisa isikhumba futhi ikhulise ukukhiqizwa okusha kwe-collagen eceleni kwe-spike ekuvuseleleni amaseli okunempilo.
Izinzuzo nezingozi: Ngenkathi ingeyona eyokuhlinzwa, le ndlela yokwelashwa ihlasela kakhulu kunezinye eziningi zokwelapha eziphinda zivuselele isikhumba, okungahumushela emiphumeleni ephawuleka kakhulu. Uma kushiwo lokho, iqiniso lokuthi liyangena kakhulu futhi lisho nokuthi ukwehlisa umzimba ngokwengxenye noma okuphelele kungadingeka ekutholeni ukunethezeka kweziguli nezikhathi zokwelashwa kuvame ukuba phakathi kwemizuzu engama-60 kuye kwengu-90. Isikhumba sizobomvu futhi sifudumale uma sithintwa, futhi kulindeleke okungenani isonto elilodwa lesikhathi sokuphumula.
Ukungafani: Kunokuphikisana okujwayelekile okuningana, njengokutheleleka okusebenzayo endaweni yokwelashwa oyifunayo. Ngaphezu kwalokho, iziguli ezisebenzise i-isotretinoin ezinyangeni eziyisithupha ezedlule kufanele zilinde ukwelashwa. I-CO2 laser resurfacing nayo ayinconywa ngezinhlobo zesikhumba esimnyama.
I-Fractional Erbium Laser Resurfacing
Isebenza kanjani: I-Erbium, noma i-YAG, ama-lasers asebenzisa ukukhanya kwe-infrared ukuletha amandla ashisayo ajulile ngaphansi kwesikhumba. Ukuqhekeka kabusha kwe-erbium laser kudala ama-patches amancane (ukulimala) ku-dermis, ungqimba oluphakathi kwesikhumba, i-collagen elimazayo namaseli esikhumba asebekhulile nokukhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen entsha nokuvuselelwa kwamaseli okunempilo. Ngamanye amagama, le ndlela yokwelashwa yenza uhlobo lokulawulwa kwezicubu ezilawulwayo ukwelapha nokuphulukisa isikhumba esonakele ukuze kuthuthukiswe ukuthungwa kwesikhumba, ithoni, nokuqina kwawo.
Izinzuzo nezingozi: Ukwelashwa kwe-erbium laser kufanelekile kangcono ezigulini ezindala, ngoba, uma kuqhathaniswa ne-microneedling, zikhomba izicubu ezingaphansi kakhulu komhlaba ukukhuphula amandla ekukhiqizeni i-collagen. Kodwa-ke, asikho isiqondisi esiqinile sokunquma ukuthi ngubani ongaba mncane kakhulu kulezi zindlela zokwelashwa. Lokhu kwelashwa kudinga nesikhathi sokuphumula esibalulekile ngokubomvu okuhlala izinsuku ezimbalwa. Ukwelashwa kwe-Erbium fractional laser akulungile kumathoni wesikhumba amnyama ngenxa yengozi enkulu yokushintsha kombala.
Ukungavumelani: Ngoba ama-lasers ashisa isikhumba, kunemiphumela emibi kakhulu okufanele icatshangelwe, kufaka phakathi ukukhathazeka maqondana ne-hyperpigmentation yangemva kokuvuvukala, eceleni kwesikhathi sokuphumula eside nokunakekelwa kwangemva kokwelapha.